५०० वर्ष अगाडि मृत्यु भएकी कीशोरीको शरीरबाट रगत निस्किएपछि बैज्ञानिक नै चकित ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
अर्जेन्टिनामा एउटा घटनाले विज्ञानलाई नै चुनौती दिएको छ । अर्जेन्टिनाका वैज्ञानिकले एउटा यस्तो श*व फेला पारेका छन् जसको मृ*त्यु करिव ५०० वर्ष पहिला नै भइसकेको थियो । तर अचम्मको कुरा के थियो भने ५०० वर्ष अगाडि मृ*त्यु भएको शरीरबाट र*गत निस्किरहेको थियो ।
यसको खुलासा वैज्ञानिकहरुले १९९९ मा गरेका थिए । विज्ञानिकहरुले अर्जेन्टिनाको एक ज्वालामुखी वि*स्फोट भएको ठाउँबाट १५ वर्षीया किशोरीको श*व निकालेका थिए । वैज्ञानिकहरुका अनुसार ती किशोरीको श*व त्यो ठाउँमा ५०० वर्ष पहिला गाडिएको थियो ।
५०० वर्ष पछि श*व निकाल्दा पनि मृ*त शरीरमा र*गत भेटिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन ती किशोरीको श*व खराबसमेत भएको थिएन । उनको कलाप र छाला जस्ताको त्यस्तै थियो ।
वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानबाट के खुल्यो भने ती किशोरीको रगतमा टीबीका ब्याक्टेरिया थिए । तर मानिसको नि*धन भएको यत्रो वर्षपछि ब्याक्टोरिया जीवित कसरी भए भन्ने प्रश्न उठ्छ । वैज्ञानिकले यो रहस्य पत्ता लगाउन आजसम्म पनि मृ*त्यु भएकी किशोरीको रगत जाँच गरिरहेका छन् । त्यसबाट टीबी रोग निको पार्ने उपाय निकिस्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ती किशोरीको श*व नजिकै सुन र अन्य बहुमूल्य आभुषण पनि फेला परेका थिए ।
समाचार५०० वर्ष अगाडि मृत्यु भएकी कीशोरीको शरीरबाट रगत निस्किएपछि बैज्ञानिक नै चकित !
फेवातालमा युवकको भेटियो शव, पौडी खेल्न नजान्दा डुबेको अनुमान